Vaovao - Tamin'ny Herinandron'ny famolavolana Guangzhou sy foara fanaovana vato tamin'ity taona ity, naka fitaovana iray izay nahazo vahana be izahay. Indostria maro no mientanentana amin'ny vato voapaika.
Nandritra ny Herinandron'ny famolavolana Guangzhou sy ny foara fanaovana vato tamin'ity taona ity, naka fitaovana iray izay nahazo vahana be izahay. Indostria maro no mientanentana amin'ny vato voapaika.
Inona no atao hoe vato miova ota? Izy io dia tontolon'ny ultra compact vita tanana ho an'ny faharetana. Efa taona vitsivitsy izay no nisy azy io, ka raha mbola tsy namorona azy ianao dia mety ho tonga tsy ho ela. Na izany na tsy izany, te hianatra ny fomba manapaka vato voapaika amin'ny fomba mety ianao. Miaraka amin'ny fahaizan'ny mpanao asa tanana sy ny fitaovana mety, hahazoanao tombony betsaka indrindra amin'ity fitaovana mahafinaritra ity ianao.
Ny mahatonga ny vato voapaika ho fitaovana lehibe dia ny faharetany sy ny fahaizany miovaova. Ny vato voapaika dia ampiasaina amin'ny fampiasana trano sy ara-barotra, anatiny sy ivelany na dia ny fanaka aza. Ary efa ela be io no lasa mandroso tsara ny safidy loko sy loko. Ny fivarotana manerantany dia mivarotra lafaoro vita amin'ny vato voadio, ary mametraka takelaka vato voadio, gorodona, rindrina, ary fitafiana maritrano ivelany.
Ireo fanambin'ny vato voafitaka
Ny toetra tsy manam-paharoa amin'ny vato sintered dia mety hahatonga azy io ho iray amin'ireo takelaka tsy mamela heloka indrindra hanapaka.
Ohatra, ny takelaka sasany dia manana lamina vita pirinty eny amboniny. Ny chips na ny tsy fahalavorariana amin'ireo dia mety hanimba ny endrika aorian'ny lamination. Ho an'ireo fitaovana vato hafa voadio toy ny Neolith izay manana endrika mihazakazaka mamaky ilay takelaka, dia mbola maniry ny hokapaina mahitsy tsara ianao mba hahatonga ny vokatrao ho tsara indrindra.
Raha mahazo tsara ny fanapahana ianao, dia avo lenta ny kalitaon'ny asanao vita. Hanana ny asa rehetra amin'ny fitaovana voadio afaka tantinao ianao. Diso izany ary mety hanao izay rehetra ilaina ianao mba hialana amin'ny fitaovana amin'ny asa ho avy.
Na dia manana milina fanapahana tetezana na fitaovana fanapahana milina antsy rano aza ianao, fa ny hafainganam-pandeha dia miadana be, ambany fahombiazana, manapaka ny fanjifana fitaovana, noho izany dia avo dia avo ny vidin'ny fanodinana.
Ahoana ny fomba manapaka vato hafainganam-pandeha haingana sy mora vidy
Ny fahombiazana amin'ity fitaovana ity dia tsotra: mahitsy sy miendrika fanapahan-jiro.
Tena madio mahitsy ary fanapahana miendrika endrikadia ilaina amin'ny valiny avo lenta izay ahafahanao mitondra olona. Mba hahazoana ireo fanapahana marina ireo dia mila fitaovana mety ianao. Raha efa manana milina fanapahana vato mandeha voaota ianao, dia voaomana. Raha tsy dia mieritreritra mampiasa vola amin'ny iray ianao. Ny masinina avoakan'ny milina fanapahana vato mandeha ho azy dia tsy mitovy. Ny hafainganam-pandeha dia hatramin'ny 180 metatra isa-minitra, nanao fanandramana be dia be tamin'ny masininay tamin'ny fitaovana vita amin'ny vato voapaika izahay. Matoky izahay fa hahazo valiny tsara mitovy amin'ny mpanjifanay manerana an'i Chine.
Vera maritrano, vera fiara, vera fanaka, vera asa-tanana, vera haingon-trano, vera vata, vera loaka, fitaratra namboarina